Dhul Xeebeed iib ah - MyProperty.so
Dhul Xeebeed iib ah
Dhul Xeebeed iib ah For Sale
Waa dhul ka kooban 100 boos isku xiran, Dhulkan wuxuu haystaa wadada weyn ee 30-ka ah ee mogadishu – Hobyo, Qeybta kale wuxuu ka haystaa Badda, Waa dhul siman oo ku yaalo meel jog sare ah oo looga faa’ideysan karo waxyaabo badan. wuxuuna leeyahay Documents saxan. Cabirkiisa booskii waa 20x20M2. Qiimaha booskii waa $2,800 iyo heshiis.
Wixii faah faahin, kala soo xiriir Kirosom Real Estate Solutions
Tell: 0612922240 / 0612922242
Updated on January 19, 2018 at 1:55 am
Hello, I'm interested in [Dhul Xeebeed iib ah]
Dhul Xeebeed iib ah - Hargeisa, Woqooyi Galbeed, Somalia
Hello, I'm interested in[Dhul Xeebeed iib ah]